Antoko Teza “Babakotom-bazaha no homanina amin’izao !”
Ny fahatsapana sy fahazoana ilay mila ovana ny fitsipi-dalao rehetra angamba no samy nanana ny azy, hoy ny filohan’ny antoko Teza, Jean Louis Rakotoamboa.
Mila mijoboka ny sasany vao mahatsapa. Manao izay danin’ny kibony ny HCC nefa tsy anjarany ny manao ny lalàna mifehy ny fifidianana. Tsy mahagaga raha nanao izay danin’ny kibony tamin’ny fanomanana fifidianana. Ny CENI dia olona notendren’ny fahefana mpanatanteraka daholo no any ifotony. Ahoana no hahafahana mino fahaleovantenan’ny CENI amin’izany ? Ny kandida, maro amin’ny volan’izy ireo no tsy mandalo lalan’ny banky (circuit bancaire). Hatramin’izao, tsy misy ilay tabilao fametrahana fampielezan-kevitra foana any ambanivohitra. Ny CFM ve ao anaty fitsipi-dalao maloto no hampanao sata ? Mampahatsiahy an’Itompokolahy Herizo Razafimahaleo izay te hametraka etika politika tamin’ny fotoan’androny. Rehefa aravina dia tsy misy afa-tsy rafi-panomanana fifidianana hanomanana babakotom-bazaha hapetraka eto no hita amin’izao fizotrany izao, hoy hatrany izy.